अष्टमी गुरुङका विषयमा श्रम मन्त्रीलाई थाहा समेत छैन् । डरलाग्दो भाईरलका कारण १८ जनाको मृत्यु, सरकार बेखवर ! - Machhapuchhre FM
विस्फोटका लागि भाडामा मान्छे परिचालन !
भोट माग्न रोबोटको प्रयोग: मतदातासामु यसरी माग्छ भोट
अष्टमी गुरुङका विषयमा श्रम मन्त्रीलाई थाहा समेत छैन् । डरलाग्दो भाईरलका कारण १८ जनाको मृत्यु, सरकार बेखवर !
Published by Machhapuchhre FM at 2017-12-03
अष्टमी गुरुङका हत्यारा खोज्न सवै नेपाली एकजुट
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईको आवुदावीमा ज्यान गुमाएकी गोरखा आरुघाट २ मान्वुकी अस्टमी गुरुङका बिषयमा हामी फलो गरिरहेका छौ । घटनाको थप जानकारी लिन र दोषी नउम्कोस भनी हामी युएइ स्थीत नेपाली दुतावास,एनआरएन युएई र युएई दुतावास काठमाडाँैसँग बारम्बार सम्पर्क गरी घटना बारे अपडेट लिइरहेका छाँै । फलस्वरुप घटनाका मुख्य आरोपी सुमन भनेर चिनिने साइमन काजी युएई प्रहरी हिरासतमा छन् । अस्टमीले रेर्कड गरेको भिडियोलाई हामीले अंग्रेजी र अरवी भाषामा अनुवाद गराएर आवुदावी प्रहरी र सिआडीलाइ उपलब्ध गराएका छाँै ।
परीवारको जिम्मेवारी बोकेर विदेशीएकी अस्टमीले आत्महत्या गर्ने विहान आफ्नी आमालाई फोन गरेर घर आउने तयारी गरेको बताएकी थिइन । अस्टमीले आमाको लागि किनेको जुत्ता र कपडा समेत भिडियो कल गरेरै देखाएकी थिइन । आमालाई नेपाल फर्कीपछी सुनका गहना लगाइदिने धोको थियो अस्टमीको ।
तर अस्टमीको यो सपना पुरा हुन सकेन् । उनकोे बाटो हेरेर बसेकी ६७ बर्षीकी आमाले छारीको शव देख्नु प¥यो । यस विषयमा हमीले गरेको रिपोटिङ हेरेपछि ललितपुर भैसेपाटीकी यस्थर थापाले मन थाप्न सकिन्न् । उनिकी आमाले उन्लाई आफ्नो गहना बेचेर पढाएकी थिइन । यहि कारण पछि यस्थरले आमाको लागि सुनको चुरा बनाएकी थिइन तर चुरा लाउन नपाउदै आमाको निधन भएपछि उन्ले त्यो चुरा अस्ष्टमीकी आमा लाई दिईदिन भन्दै हाम्रो कार्यालय आइन् ।
अष्टमी गुरुङको हत्या भएको हो वा उनले आत्महत्या गरेकी हुन् अझै खुल्न सकेका छैन् । उन्लाई बलत्कार गर्ने अरेवियनगल्फ जेनेरेज म्यान्टिनेन्स एण्ड क्लिनिङ एजेन्सीमा कार्यरत बंगलादेशी साईमन काजी अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।
सामान्य रोगको उपचार नभएपछि मुगुमा एक हप्तामा १८ जनाको मुत्यु
कर्णाली वासी कहिले भोकमरी त कहिले झाडापखालाका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउछन् । मुगुमा फेरी चिसोले उत्पन्न रोगका कारण दर्जनौले ज्यान गुमाएका छन् । सदरमुकामबाट २/३ दिनको पैदल यात्रा पछि पुगीने विकट गाँउहरुमा अहिले दैनिक जसो भाइरल ज्वरो, रुगा, खोकी,निमोनियाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । सामान्य लाग्ने रुगाखोकी, भाइरुल जरोको समेत औषधि नपाएपछि निमोनियाको शिकार भएर धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । छायानाथ रारा नगरपालीका र खत्या गााँउपालीकामा एक हप्तामा मात्रै १८ जनाले चिसोबाट उत्पन्न रोगकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
जिल्लाबाट उपचारका लागि टोली हिडेको भनिएपनि बिरामीको संख्या बढिनैरहेको छ ।
प्रकोपले भयावह अवस्था लिएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट औषधी र उपचार टोली पठाएको जनाइएपनि प्रयाप्त नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
कडा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाटी पाक्ने, पेट दुख्ने रिङगटा लाग्ने बान्ता आउने आंखा दुब्ने खाना खान मन नलाग्ने जस्ता रोगको लक्षणले शरिर कमजोर हुदै जादा औषधि उपचार नभएर मृत्यू हुने गरेको छ । गम्था, रिघा, रातापानी, कोटडाडा, श्रीकोट लगायत बस्तीहरुमा ब्यापक भाइरल ज्वरो फैलिएको छ । कतिपय गाउँ वस्ती अझै दुर्गममा भएकाले कति धेरै मानिस रोगबाट प्रभावित भएकाछन् भन्ने यकिन तवीक तथ्याकंक आउन सकेको छैन ।
भोट नेतालाई होइन, परिवारको भविष्यलाई दिने हो – Rabindra Mishra | Nepal Aaja
Published by Machhapuchhre FM at 2017-12-02
sidha kura janata sanga episode 153
sidha kura janata sanga full episode 153
sidha kura janta sanga full epi...
SIDHAKURA JANTA SANGA
अष्टमी गुरुङका विषयमा श्रम मन्त्रीलाई थाहा समेत छैन् । ज्वरोका कारण १८ जनाको मृत्यु, सरकार बेखवर – SIDHA KURA JANATA SANGA!! EPISODE 153
SUBSCRIBE : http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : http://www.news24nepal.tv
SIDHAKURA LOSING REPORT-NEWS 24
औषधी खाने पैसापनि नराखी कलेजलाई दान दिएको घर दुर्वेशनीको अड्डा । २६ दिनमा कुकुरको उद्धार